अभावले बनायाे सडक गायनका अभियन्ता
नयाँ बानेश्वर संसद् भवनअगाडिको पीपलबोट । साँझ ५ बजे । एकजना किशोरको छेउमा एउटा पानीको बोतल । भुइँमा गितार राख्ने ब्याग, त्यसमाथि केही पैसाका नोटहरू । छेउको एउटा पानामा लेखिएको छ, ‘हेल्प माइ स्टडी ।&...
नामजस्तै ‘जनप्रिय’ छ यो सामुदायिक विद्यालय
पोखरा– देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गइरहेका बेला पोखरा महानगरपालिका–८ स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयले भने व्यावसायिक एवं गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट विद्यार्थी तथा अ...
शिक्षकको स्थायी नतिजा प्रकाशनमा किन ढिलासुस्ती ?
काठमाडौं– गत असार २९ र ३० गते लिइएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा नतिजा ४ महिना बितिसक्दा पनि प्रकाशन हुन सकेको छैन । खुला तथा आन्तरिक परीक्षा एकै समयमा भएकाले नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको बताउँछन्, शिक्षक स...
कात्तिक २९, २०७५
तीन महिनामा ६ सय बलात्कारका घटना, किन बढ्दै छ बलात्कार ?
काठमाडौं– कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । हत्या भएको सयौँ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले हत्यारा पहिचान गर्न सकेको छैन । अनुसन्धान अझै जारी रहे पनि यसमा खासै प्रगति भने देख...
पुष्पराज चाैलागार्इंको बारेमा
चाैलागाईं २०७५ साल कार्तिक महिनासम्म फरकधारका लागि रिपाेर्टिङ गर्थे ।